Posted By : Govinda Baniya
संस्मरण -मेरो स्मृतिमा बेनी मोर्चा
महान् जनयुद्धको विकास प्रकृयासँगै थुपै्र हार–जीत, क्षति–उपलब्धिहरूको बिचबाट गुज्रंदै भिषण चुनौतीको सामना गर्दै, महान् संभावनाका नयाँनयाँ क्षितिजहरू उघार्दै जनयुद्धले आफ्नो आठौं बसन्तहरू पार गर्दै नवौँ वर्षमा ओझिला पाइलाहरू बढायो । आफ्नो जीवनको सबैभन्दा पीडादायी, कष्टकर, लामो र भीषणताको बिचबाट रणनीतिक रक्षाको चरण पार गरेर अत्यन्त सम्वेदनशील चरण रणनीतिक सन्तुलनको चरणमा पदार्पण ग¥यो । कहिले ‘रोमियो’, ‘किलोशेरा–टु’ अपरेशन त कहिले अत्यन्त आततायी जङ्गगली अपरेशन, सङ्कटकालको त्याग–तपस्या र उच्च वलिदानद्वारा प्रतिरोध ग¥यो । कहिले देशैभरि माओवादीमय वातावरणको श्रृजना गर्दै, काठमाण्डौका हरेक गल्ली र चोकहरूमा ‘गणतन्त्र–जिन्दावाद, माओवादी–जिन्दावाद’का नाराहरू गुञ्जाउँदै सिंहदरबार–नारायणहिटी–दिल्ली हुँदै अमेरिकी ह्वाइटहाउससम्मका प्रतिकृयावादीहरूमा जनयुद्ध र गणतन्त्रको भूत सवार गराउन सफल भयो । कुनैबेला खुकुरी र भरुवा बन्दुक लिएर चौकी कब्जा गर्न जानेले कुनै दिन ठूलठूला चलायमान र मोर्चाबद्ध युद्धको अभ्यास गर्दै दाङ, स्याङ्जा, सोलु, अछाम, अर्घाखाँची, गाम, जुम्लाका अत्यन्त ऐतिहासिक र उच्च मोर्चाहरू निकै वीरतापूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यो । दोस्रो वार्ताकालको अन्त्यसँगै देशैभरि निकै बहादुरीपूर्ण र तिलस्मी प्रकारका कमाण्डो एक्सनको साथमा कैयौँ साना–ठूला गरेर सैयौँ मोर्चाहरू सफल भए । विकेन्द्रित कारवाहीको सफलतासँगै ठूलठूला कार्वाहीको माग स्वभावैले बढ्दो रहेछ । यसै अवधिमा हान्डिङ, भावाङका मोर्चाबद्ध लडाइँ र बाँकेको कुसुम र भालुवाङको साहसिक रेडका आंशिक असफलताबाट दुश्मनको मनोबल क्षेणिकरूपमा उठेजस्तो देखिनु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन । यो अवस्थामा दुश्मनको दुश्प्रचारसँगै हाम्रा मध्यमवर्गीय तप्कामा केही अन्योलताको वातावरण अवश्य श्रृजना भयो ।
कस्ले गर्र्यो सदरूल मियाँको निर्मम हत्या ?
नेपालमा मुस्लिम अगुवाको हत्यामा अन्तराष्ट्रिय गिरोहको संलग्नताको आशंका गरिन्छ । पूर्वमन्त्री मिर्जादिल सादवेग, संचार उद्यमी जमिम साह र मुस्लिम नेता फैजान अहमदको हत्या सम्ममा अन्तराष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रियताको पक्षमा खरो कुरा गर्ने पूर्व स्वतन्त्र सभाषद सदरूल मियाँको हत्यामा पनि त्यस्तै अन्तराष्टिय गिरोहको संलग्नता रहेको अनुमान गर्नेहरूको कमी छैन् । तर, मियाँको हत्या राजनीतिक प्रतिसोधका कारण भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सुरक्षा स्रोतले मियाँको हत्यामा अन्तराष्ट्रिय गिरोहको हत्या नभएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । मियाँलाई चिनेका अन्य मुस्लिम अगुवाले पनि सदरूललाई बाह्य सुरक्षा थ्रेट नभएको बताउँछन् । ‘खासकुरो त छानविनपछि आउँला, मियाँलाई चिनेका अर्का मुस्लिम कार्यकर्ता भन्छन्, 'फैजान वा जमिमको जस्तो षडयन्त्र होइन ।’
हत्या राजनीतिक षडयन्त्र ?
०५४ सालमा नेपाली काग्रेसको तर्फबाट कल्याणपुर गाबिस २ मा वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएर राजनीति सुरू गरेका मियाँ स्थानिय स्तरमा लोकप्रिय थिए । संविधानसभामा मियाँसँग संगत गरेका सभासद विश्वेन्द्र पासवानले हत्यामा राजनीतिक षडयन्त्र रहेको बताए । सप्तरीमै रहेका पासवानले नेपालीहेडलाइन्सलाई भने, 'हत्या राजनीतिक पूर्वाग्रहले भएको हो ।’
संविधानसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरका ठूला दललाई पछारेर मियाँ स्वतन्त्र सभासद बनेका थिए । एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा तीनवटा मधेशी दललाई पछारेर मियाँ निर्वाचित भएका थिए । मियाँले १० हजार ६ सय ३ मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका दानलाल चौधरी थिए, उनले ६ हजार ४ सय ७९ मत प्राप्त गरेका थिए । एकीकृत माओवादीकी सरस्वती कुमारी चौधरीले पनि ६ हजार हाराहारी मत ल्याएकी थिइन् । काग्रेसका उम्मेदवार मुक्तिनाथ चौधरी र फोरमका छेदिलाल यालवको जमानत जफत भएको थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचनको तयारी सुरू भएको समयमा मियाँको लोकप्रियताबाट झस्किएका शक्तिले उनको हत्या गरेको आशंका गरिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनको नजिता हेर्दा उनका प्रतिद्वन्दी एमाले र माओवादी उम्मेदवार छन् । मियाँको हत्याका सम्बन्धमा केही केहीले भने एमालेकै नेतातर्फ औला समेत ठड्याएका छन् । आफ्नो निकट प्रतिद्धन्दी एमालेका सभाषद् भएका कारण पनि उनीहरूले यस्तो आशंका गर्दै त्यसतर्फ औला ठड्याएका हुन् । प्रहरीले मियाँको हत्याबारे अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्ने बताएको छ ।
संविधानसभामा बबन सिंह र मियाँ दुईजना मात्र स्वतन्त्र सभासद थिए । संविधानसभाको संवैधानिक समिति र राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिमा उनले काम गरेका थिए । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको समयमा समितिले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालासँग छलफल गरेको समयमा सिमा क्षेत्रमा भारतीयबाट नेपालीमाथी भइरहेको दमनबारे बोल्दै गर्दा उनले आशुँ चुवाएका थिए ।
मियाँको हत्या सम्बन्धमा पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको भनाई यस्तो छ...
पूर्व सभासद सदरूल मियाको हत्या एक कायरतापूर्ण कार्य हुन् । सबैका प्रिय ऊनी धार्मिक विचारका थिए । उनको आत्माले शांति पाउन् । यस घटनाको गंभिरताका साथ छानविन हुनै पर्दछ । हाल देशकै र खास गरी सप्तरी, सिरहा तिरको खस्कदों सुरक्षाले हामी सबैको जीवनलाइ खतरामा पारेको छ । जो सरकारको विपक्षमा छ वा सरकारको चासो भित्र छैन, उ कुनैपनि बेला मर्न सक्ने स्थितिमा छ । नमारूञ्जेल बाच्ने अवस्था मात्र छ । निर्वाचन पहिलेको यो घटना सामान्य होइन हैं । यसमा विचार हुनै पर्दछ ।